Cassida Tiger UV / MG Mari Counter
Mutengo wepakutanga $270.00
Mutengo wanhasi $204.99
Inesimba Performance mune Smart Dhizaini Iyo Cassida Tiger inounza yekutengesa-giredhi kuita uye maficha mune akapfava, Ultra-compact dhizaini. Simbi...
Mutengo wepakutanga $360.00
Mutengo wanhasi $309.00
Iyo Cassida 6600 inyanzvi yemari counter yakagadzirirwa kubata akasiyana siyana ekuverenga mabasa. Inokurumidza, yakarurama, uye yakagadzirirwa nehuwandu hwe ...
Cassida C100 Coin Counter uye Sorter
Iyo Cassida C100 Coin Counter iri nyore kwazvo kushanda. Ingozadza hopper iyo inogona kutora mari inosvika zana nemazana mashanu, uye rega muchina uronge uye utaure ...
Cassida C200 Coin Counter, Sorter uye Roller
Cassida C500 Coin Counter uye Sorter
#3 Akanakisisa Mutengesi muCoin Counters uye Sorters Coin Kuverenga: Iyo Cassida C500 inosanganisa izvo zvinonyanya kudiwa mukaunda yekoini kuita imwe yakaoma, c...
Cassida C850 Coin Counter uye Sorter
C850 inopa chaiyo kuita mune inorema-basa kaunda Iyo Cassida C850 inoita nekukurumidza basa remari yako kana chiratidzo chekugadzirisa, ichikupa iwe sarudzo dzecou ...
Kurumidza uye nyore kuputira mari neiyi chishongedzo chubhu. Yakagadzirirwa kushandiswa neCassida C500 uye C850 Coin Counters uye Sorters. Inowanikwa pe ...
Cassida TillTally Mari Kuverenga Chikero
Kuverenga pasi dhirowa izere nemari hakuna kumbove kuri kutsanya kana izvi zvakapusa pamberi. Iyo Cassida TillTally Counting Scale inoverenga yakasununguka mari, yakakungurutswa c ...
Cassida Universal Thermal Inotambira Printer
Kurumidza uye nyore kuprinta marekodhi emari yekubata zviitiko neiyo Universal Cash Handling Printer. Hukuru hwayo hudiki uye simba rebhatiri rinobvumira ...
Cassida YakachenaPro Kuchenesa Swabs Bhokisi re15
Iyo Cassida CleanPro Kuchenesa Swab (15 Pack) yakarongedzwa imwe neimwe uye vane matipi avo efuro zviri nyore pre-kuzadzwa nedoro. Aya ano -...
Cassida CleanPro Yakazara Yekuchengetedza Kit yeMari Counters
Iyo Cassida CleanPro Yakazara Yekutarisira Kit inokupa iwe ese maturusi anodiwa kuchengetedza kushanda kwepamusoro kwekaunda yako yemari. Inosanganisira: Ca...
Cassida YakachenaBill Kuchenesa Makadhi Bhokisi regumi
Yakasimudzwa yekuchenesa waffles inobvumira kudzika uye kwakanyatso kuchenesa kana ichienzaniswa neakajairwa ekuchenesa makadhi. Iyo waffles yekuchenesa inogadzira chitubu ...
Cassida Dust Cover yeMari Counters
Dzivirira kaunda yako yemari kwenguva yakareba inoramba ichishanda neCassida Dust Cover. Ichi chivharo chakasimba chakagadzirirwa kushandiswa neCassida Bill C...
Iyo Cassida Yakachena Pro Mhepo Duster (6 Pack) zvakachengeteka uye zvinobudirira inosvika idzo dzakaoma kuchenesa nzvimbo mukati memari yako kana coin counter. Nesimba...
Cassida Tiger UV Mari Counter
Mutengo wepakutanga $230.00
Mutengo wanhasi $189.00
Mutengo wepakutanga $440.00
Mutengo wepakutanga $288.00
Mutengo wanhasi $219.00
Kuverengera kwemari kwepamberi kwakasanganiswa nekuonekwa kwemanyepo kune ese-mu-imwe mari yekugadzirisa mhinduro! Inoverengera kusvika 1,300 mabhiri paminiti kuita qu...
Mutengo wepakutanga $300.00
Mutengo wanhasi $244.99
Mutengo wepakutanga $599.00
Mutengo wanhasi $449.00
Zvimiro Zvinogoneka kumhanya zve800, 1,000, 1,200 kana 1,500 mabhiri paminiti akanakira mari mune chero nyika. Kumhanya zvishoma kunobvumira mabhiri akasakara kuti apfuure...
Mutengo wanhasi $499.00
Mutengo wanhasi $549.00